Bhala Kuba Umhla My Pet
Joyina iqela lethu elikhulu ngabanikeli.
Siya kusoloko ukwamkela amanqaku kakhulu ukusuka ababhali, bloggers nababhali abazimeleyo. Kuba ingcamango oko intooyikhangelayo, nceda ufunde amanye amanqaku kwisiza. Oku kuya kukunika ufifi ilizwi lethu kunye nohlobo amanqaku Sisebenze kakuhle abaphulaphuli bethu.
isigqibo kwinqaku ncwadana isekelwe ngokwemfanelo nokufaneleka inqaku ngamnye.
Ukuba siyavumelana ukupapasha inqaku lakho lokuqala, ke incwadi yesivumelwano iza ku tyikitywa phambi kokuba intlawulo yenziwe xa izinga yethu sangoku ukuze inqaku ngalinye. Oku kuya kuba isivumelwano ukuba iziphakamiso ezilandelayo ziya kupapashwa. Zonke izimvo ezilandelayo ukupapashwa luya kusekelwa merit nokufaneleka inqaku ngamnye.
abaphulaphuli yethu ekujoliswe US ​​phezu 18 nabangatshatanga.
Kunye ngaphandle ezincinane, amanqaku kufuneka phakathi 600-1000 amagama.
Izihloko umxholo ukuba basebenze kakuhle zizichazi ngamandla, amanani (umzekelo: kwizintlu) kunye nemibuzo.
Zonke izimvo inqaku mazibe zezentsusa kwaye zange lupapashwe ngaphambi.
Ababhali angakhetha ukuba ababhali ghost okanye inkangeleko zazo kupapashwa kwisiza.
Ukuba angenise inqaku ingqalelo, nceda email nqaku:
PHAWULA: Angensiwe arhente okanye ishishini lorhwebo ziya kuqwalaselwa kwi non behlawulwa